YEYINTNGE(ကနဒေါ): Tuesday, December 07
7 Dec 2010 ဒိုင်ယာရီ
7 Dec 2010 Yeyintnge's Diary
BY YeYint Nge ... 12/07/20100comment
ပြည်တွင်းက လူငယ်နှစ်ဦးရဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ဗွီဒီယိုတွေအပေါ် အမြင်
(A) ခုတလော မီဒီယာတွေမှာ သတင်းကြီးနေတဲ့ ထောက်လှမ်း ရေးပြုတ် ခင်ညွန့် ဗွီဒီယိုတွေ ကြည့်ဖြစ်လာဗျ အသံမပါတာ အ ရင်ထွက်လာတယ် နောက်ပြီးမှ အသံနဲ့ ထပ်ထွက် လာတယ်။ လူတွေကတော့ ထောင်ထဲထပ်ထဲ့သလိုလို၊ နအဖ က ပြန်ပဲသုံး တော့မလိုလိုတွေ သတင်းတွေ ထွက်နေတယ်ဗျ
(B) ကျနော့်အမြင်တော့ အဲဒါတွေကဆိုဒ်ဝါးတွေဗျ ၂၀၀၅ တုန်းက ရုပ်သံတွေလို့ သူတို့ အ သိုင်းထဲက ထွက်လာတဲ့ စကားတွေအရပေါ့၊ အဲဒီထဲက ကလေးတွေဆိုရင် အခုကျောင်း တွေတောင်တက်နေပြီ စင်္ကာပူမှာ ၅ တန်းတက်နေပြီ ပြည်တွင်းပြည်ပမှာဆိုရင် ခုတ လော ခင်ညွှန့်တို့ ကိုရီးယားမင်းသား ဂျူမုံတို့က အဲဒီသတင်းတွေကို လူတွေကိုအရုဏ် ပြောင်းတွေးစေမယ့်အကြောင်းတွေ လှိုင်လှိုင်ကြီးဖေါ်ပြနေတယ်
ခု ခင်ညွန့် ရုပ်သံတွေက ၂၀၀၅ နိုဝင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့လောက်က ဟာတွေဖြစ်မယ် နောက်တခုက ပြည်တွင်းမှာ ကိုရီးယားမင်းသားကို လေဆိပ်က၀င်တော့ VIP က ၀င်ခိုင်း တာ ဂျူမုံဆိုတာလေ
(A) မြန်မာပြည်အတွက် အရေးတကြီးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ ဟုတ်လား။
(B) ရွှေတိဂုံစေတီမှာလဲ VIP မှာ ထောက်လှမ်းရေးမှူးနဲ့ ပေးတွေတာတွေလုပ်တာ အဲဒါ တွေက ပြည်သူကို အတွေးစတွေ လမ်းလွဲအောင် ဆိုက်ဒ်ဝါးကို သုံးနေတာတွေပါ ဒီမိုက ရေစီ အင်အားစုတွေကလဲ ဘာလဲညာလဲ အဲဒီကိစ္စတွေ ပြောဆိုနေကြတာ မြင်နေကြား နေရတယ်။
(A)သူတို့ ဝါဒဖြန့်ချိရေးကလည်း အချိန်ကိုက်လုပ်ထားတော့ လူတွေ သို့လောသို့လော တွေ တွေးစရာ ပြောစရာ ဖြစ်လာရတာပေါ့ဗျာ
(B) ရုပ်သံထဲက အ၀ါရောင်ဝတ်နဲ့ ခင်ညွှန့် ချီထားတဲ့ကလေးက အခုကျောင်းတက်နေ တာ ၅ တန်းလေ အခု စင်ကာပူမှာပဲပေါ့
(B) အတိတ်တွေနဲ့ ပစ္စုပ္ပန်ကို ရောထွေးပြီး ပြည်သူကို အမြဲလှည့်စားတက်တဲ့ နအဖ အလိုတော်ရိတွေရဲ့ ပြကွက်လေးမှာ မျောနေမယ်ဆို ရှေ့ဆက်ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် နှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ်လာနိင်တာမို့ လမ်းတွေ့တိုင်း လိုက်မလျှောက်ကြပါနဲ့လို့ပဲ ပြောချင် တယ်ဗျာ
(A) အခု ခင်ညွန့်က ဘယ်မှာလို့ ထင်လဲ
(B) တာရိုမှာလို့ ကြားသိရတယ် တာရိုက တောင်တွင်းကြီးနဲ့ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း နှစ်နေရာရှိ တယ် ဘယ်မှာဆိုတာတော့ အတိအကျမသိရဘူး အဲဒီမှာ အချုပ်ချထားတာ တခုရှိတာ ကမင်းသားခေါင်းနဲ့လဲ ပြန်ထွက်လာနိုင်တယ် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ကနေ ပြန်ခေါ်သွား တာက၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနီးကာလမှာလေ အဲဒါနောက်ဆုံးပဲ
(A) ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ ပြည်သူလူထုကို လှည့်စားတာပါ အတိုက်အခံတွေရော အပစ်ရပ်တွေ ပါ ခင်ညွန့်က မွှေထားတာမဟုတ်လား
ခင်ညွန့်ကို ကြောက်ပြီး ထောင်တွေဘာတွေများ ထပ်ချလားပေါ့နော်
(B) ဖြစ်လာနိုင်တာကတော့ ဦးသန်းရွှေလိုချင်တာကို ပေးနိုင်သူက မြန်မာပြည်မှာနှစ် ယောက်ပဲရှိတယ် တယောက်အမေ…. နောက်တယောက် ခင်ညွန့်၊ ဘာကိုလိုချင်တယ် ဆိုတာတော့ မသိပေမဲ့ သူ့အတွက် ဒီလူနှစ်ယောက်ကတော့ သေချာပေါက်အရေးကြီး တွေလေ သန်းရွှေအတွက်ပေါ့ အဲဒီတော့ သူကျွမ်းကျင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးနည်း တွေကို ဘယ်လိုအကွက်ချသုံးမလဲ တွေးနေရတာပဲဗျ
(A) စစ်အုပ်စုဝင်တွေမှာ အကျင့်တခုရှိတယ် သူတို့ပယ်ထားတဲ့ သူတို့လူကို ပြန်တော့ သုံးတတ်တယ် ဒါပေမယ့် လူရာမသွင်းတော့တဲ့ အကျင့်ရှိတယ် နောက်တခုက အပယ်ခံ ထားရတဲ့ လူကလည်း မျက်နှာလိုမျက်နှာရ ပြန်လုပ်ဖို့ ဘယ်တော့မှ ဝန်မလေးဘူး လူရာ မသွင်းခံရရင်နေ မျက်နှာလေး ပြန်လုပ်ရတော်ပြီ အဲဒီ အကျင့်ပဲဗျ
ဦးသန်းရွှေအကျွမ်းကျင်ဆုံးက စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေးဗျ အဲဒီတော့ သူဘယ်လိုအကွက်ချ မလဲလို့ တွေးရတာတော့ခက်တယ် ဦးခင်ညွှန့်ပေါ်လာရင်တော့ မင်းသားခေါင်းနဲ့ ပြန် ထွက်လိမ့်မယ်လို့ ပဲတွေးမိတယ် တွေးဆုံဆွေးနွေးရေးဆိုတာကို သူက ကြားဝင်လာ မယ်ထင်တယ် လိုအပ်လွန်းမက လိုအပ်လာခဲ့ရင် ဖြစ်မယ်
(A) ကျနော်ကတော့ မင်းသားခေါင်းဆောင်းရလိမ့်မယ်လို့မထင်တော့ဘူး အလွန်ဆုံး ဝင် ပါ ခွင့်ရရင် စင်အောက်ကပဲ ထိုးခွဲသပ်လျှို့ ကိစ္စတွေကိုပဲ သန်းရွှေအတွက် လုပ်ပေးလိမ့် မယ်လို့မြင်တယ်
(B) အင်း.. ဖြစ်နိုင်ချေတထောင်က အစစ်အမှန်တခုမဟုနိုင်ဘူးလို့ ဆိုရိုးရှိတာကိုးဗျ၊ အခု ကျနော်တို့ တွေးတာတွေ ဖြစ်ချင်မှလဲဖြစ်လာမှာလေ ဘယ်သူတွေးတာ မှန်နိုင်မ လဲဆို တာ အချိန်က တရားသူကြီးလုပ်လိမ့်မယ် နှစ်ယောက်လုံးမှားပါစေ ဆုတောင်းတာ ပဲဗျ
ဘာလို့ဆို သူဝင်လာရင် ပိုရှုပ်မယ်လေ ဟားဟား…
(A) အောင်ကြီး က ဦးနေဝင်း ကို မျက်နှာလိုမျက်နှာရလုပ်ပြီး လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအ တွင်း ထိုးခွဲခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ပြီးတော့ ဒီမိုကရေစီအင်းအားစုဘက်ရောက်လာပြီး စစ် တပ်ကို စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှားဖို့ လာပြောတာတွေ အဲဒီအတွေ့အကြုံတွေ ကျနော်တို့ တွေမှာ ရှိပြီးသားပဲဟာ
(B) ဟုတ်ပါ့ဗျာ စမူဆာကြီး … ဟား ဟား
အရေးကြီးတာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ စစ်အာရှင်တွေ မြန်မာပြည်မှာ ပျောက်ကွယ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်လေ
ABMA ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၂၁) By abma | December 7, 2010
ABMA Journal Volume 1 No 21
KNU နှင့် ABSDF တို့ ပူးတြွဲ့ပီး မာနယ်ပလောအား ပြန်လည်သိမ်းပိုက်
မကဒတ ရဲဘော်ဟောင်းများသို့ ။
- KNU နှင့် ABSDF တို့ ပူးတြွဲ့ပီး မာနယ်ပလောအား ပြန်လည်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီ ။ မကဒတ (ဗဟို)မှ အကြောင်းကြားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီဇင်ဘာလ ၇ရက်။ စောသိန်းမြင့် (ကေအိုင်စီ)
ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၇)နယ်မြေအတွင်း နအဖနှင့် ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်ဖွဲ့ဝင်များအကြား တိုက်ပွဲများ ရံဖန်ရံခါ ဖြစ်ပွား နေသလို ကေအဲန်ယူ တပ်မဟာ(၆)နယ်မြေဘက်တွင်လည်း နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့ကတည်းက ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နအဖနှင့် ဒီကေဘီအေတို့ကြား တိုက်ပွဲ အခြေအနေများမှာလည်း ယခုအချိန်ထိ ပြင်းထန်လျှက်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
ThanShwe Order YeMyint to Meet KhinNyunt- MaungAye Objects to Reuse
Divided Heart ဇာတ်ကားမှာ ဒေါ်စုအဖြစ် မီရှဲလ်ယိုး သရုပ်ဆောင်
By မသင်းသီရိ အင်္ဂါ, 07 ဒီဇင်ဘာ 2010
ရုပ်ရှင်မင်းသမီး မီရှဲလ်ယိုး မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြန်လည်မထွက်ခွာမီ ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် လိုက်ပါပို့ဆောင်သူများနှင့်အတူ တွေ့ရစဉ်။ ဒီဇင်ဘာ ၇၊ ၂၀၁၀။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိသားစုဘ၀ကို အခြေခံပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ကြိုးပမ်းနေမှုအကြောင်း ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်မယ့် ကမ္ဘာကျော် ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး မီရှဲလ်ယိုး (Michelle Yeoh) မနေ့က ရန်ကုန်မြို့ကို ရောက်ရှိလာပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်နဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ကြီးမားတဲ့ စွန့်လွှတ်မှုတွေနဲ့ ရပ်တည်နေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ခွင့် ရတဲ့အတွက် အန်မတန် ဂုဏ်ယူသလို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တူအောင် ကြိုးစား သရုပ်ဆောင်ထားတယ်လို့လည်း ရုပ်ရှင်မင်းသမီး မီရှဲလ်ယိုးက NLD ပါတီကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိသားစုဘ၀ အကြောင်းကို အခြေခံပြီး ပြင်သစ် နာမည်ကြီး ဒါရိုက်တာ လူ့ခ် ဘတ်ဆွန် (Luc Besson) က Divided Heart ခွဲခြားထားသော နှလုံးသားလို့ ယာယီ အမည်ပေးပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ ကမ္ဘာကျော် ဟောင်ကောင် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး မီရှဲလ်ယိုးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေရာက သရုပ်ဆောင် ရိုက်ကူးနေတာပါ။
ဒါ့ကြောင့် မနေ့က ရန်ကုန်ကို မင်းသမီး မီရှဲလ်ယိုး ရောက်လာခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လှုပ်ရှား ပြောဆိုမှုတွေကို တနေ့လုံး စောင့်ကြည့်နေခဲ့သလို သူ့အနေနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေရာကနေ သရုပ်ဆောင်ခွင့် ရတဲ့အတွက် မင်းသမီး မီရှဲလ်ယိုးက ဂုဏ်ယူ ၀မ်းသာမိတယ် ဆိုတာကို ပြောသွားခဲ့တယ်လို့ NLD ပါတီက ဦးဝင်းထိန်က ပြောပါတယ်။
“သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဘ၀ တစိတ်တပိုင်းကို မင်းသမီးအဖြစ်နဲ့ တာဝန်ယူပြီး ရိုက်နေတယ်လေ။ ပထမအပိုင်းကတော့ အောက်စ်ဖို့ဒ်မှာ ဒေါ်စု ပညာသင်တဲ့ အပိုင်းကို သူရိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ ရိုက်ပြီးတော့ မလေးရှားမှာ ဆက်တင်တွေ ဘာတွေ ပြင်ပြီးတော့မှ မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လှုပ်ရှားမှုတွေကို ရိုက်တယ်။
“သူပြောတာကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် တယောက်ကို ကိုယ်စားပြုပြီးတော့ သရုပ်ဆောင်ရတာ အင်မတန် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဒေါ်စုလွတ်လာပြီးမှ အင်တာနက်တို့ Face book တို့မှာ တင်တဲ့ဟာတွေ သူ ကြည့်ပြီးပြီလေ။ ဒေါ်စုရဲ့ အနေအထားက International Icon ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ် တဦးကို ကိုယ်စားပြုပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ရတဲ့အတွက် အရမ်း ဂုဏ်ယူတဲ့အကြောင်း ပြောသွားတာပေါ့။”
ဒီဇာတ်ကား ရိုက်ကူးဖို့အတွက် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး မီရှဲလ်ယိုးဟာ ၃ နှစ်နီးပါးလောက် လေ့လာခဲ့တာကိုလည်း ပြောပြခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ဒါရိုက်တာက အဲဒီဇာတ်ကားနဲ့ ပတ်သက်လို့ အတော်ကြိုးစားတယ်တဲ့။ ဇာတ်လမ်း အနေအထားရော၊ ဇာတ်ညွှန်း အနေအထားရော ၃ နှစ်လောက် လေ့လာတယ်။ လေ့လာပြီးတော့ သူနဲ့သင့်တော်တယ်ဆိုပြီး သူ့ကိုငှားတဲ့အခါမှာ သူတို့ ၂ ယောက်စလုံး ပေါင်းပြီးတော့ ၃ နှစ်လောက် လေ့လာပြီးတော့မှ ဒီဇာတ်ကားကို ရိုက်ကြတာလို့ ပြောတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တူအောင် သူ့ရဲ့ မိန့်ခွန်းတွေ၊ သူ့ရဲ့အမူအယာတွေကို ကြည့်ရတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တူအောင် ၀ိတ်ချတာ ၁၀ ပေါင်လောက် ကျသွားတယ်ဆိုပြီး သူပြောပြတာပေါ့။
“ရိုက်တဲ့အခါမှာ သူရိုက်တဲ့ပုံတွေမှာ Blackberry နဲ့ ယူလာတယ်။ ယူလာတော့ သူ့ပုံက ဒေါ်စုလို ဗမာဝတ်စုံနဲ့ ၀တ်ပြီးတော့မှ ပန်းပန်ထားပြီး ဘေးကရိုက်ထားတဲ့ပုံကို ကြည့်ရတာ ကျနော် တော်တော် အံ့သြသွားတယ်။ အရမ်းတူတာပဲ။”
ဒီဇာတ်ကားကို လန်ဒန် အပါအ၀င် မလေးရှားနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာလည်း ရိုက်ကူးခဲ့ရာမှာ ဒီနိုင်ငံတွေမှာ ရောက်နေကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
“အောက်စ်ဖို့ဒ်မှာ ရိုက်တဲ့ အခန်းတွေကျတော့ သူ့သား ကင်မ်က အဲဒီမှာ လိုက်ပြီး ကူညီတော့၊ မလေးရှားမှာ ဆက်တင်တွေနဲ့ လုပ်ပြီးတော့ ရိုက်တဲ့အခါမှာ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံမှာ ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့လူတွေ တော်တော်များများကို သူတို့က ငှားလိုက်တယ်။ ငှားတဲ့အခါ တချို့တ၀က်က ဆန္ဒပြတဲ့ ကျောင်းသားတွေ အမူအယာလုပ်တယ်၊ တချို့တ၀က်က သူတို့ကို နှိမ်နင်းတဲ့ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အစည်းက လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းတွေ လုပ်တယ်။
“လုပ်တဲ့အခါမှာ အဲဒီကျောင်းသားတွေက ဘာမှ သင်စရာ မလိုဘူးတဲ့။ မင်းတို့ ဆန္ဒပြတဲ့ကောင်တွေ သွားပြီးတော့ နှိမ်နင်းလို့ ခေါင်းဆောင်က ညွှန်ကြားလိုက်တာနဲ့ အဲဒီကောင်တွေ ရိုက်တာ၊ နှက်တာ၊ ခြေထောက်နဲ့ ပိတ်ကန်တာတွေ၊ သူ လန့်ဖြတ်ပြီး မူးတောင် မူးသွားတယ်တဲ့။”
NLD ပါတီက ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ဦးဝင်းထိန် ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မင်းသမီး မီရှဲလ်ယိုးဟာ ဒီကနေ့မှာတော့ ရန်ကုန်ကနေ စင်ကာပူနိုင်ငံကို လေကြောင်းနဲ့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပါပြီ။ ကွဲကွာနေကြတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိသားစုဘ၀ အကြောင်းကို အခြေခံပြီး မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှုအကြောင်း အပါအ၀င် စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်မျိုးတွေကိုလည်း ထည့်သွင်း ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
အခုဇာတ်ကားကို ရိုက်ကူးတဲ့ ပြင်သစ်ဒါရိုက်တာ လူ့ခ် ဘတ်ဆွန်ဟာ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတဦး ဖြစ်သလို မင်းသမီး မီရှဲလ်ယိုး ဆိုရင်လည်း ဂျိမ်းစ်ဘွန်း ဇာတ်ကားတခုဖြစ်တဲ့ Tomorrow Never Dies နဲ့ ဂျပန်ကခြေသည် ဇာတ်ကားတခုဖြစ်တဲ့ Memoirs of Geisha ဇာတ်ကားနဲ့လည်း နာမည်ကြီး သရုပ်ဆောင် ဖြစ်သလို Crouching Tiger, Hidden Dragon ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာလည်း အင်မတန် အောင်မြင်ထင်ရှားတဲ့ ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးတဦး ဖြစ်ပါတယ်။
by Kyaw Thu on Monday, December 6, 2010 at 9:23am
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သားငယ် ကင်မ် အဲရစ်စ် (ကိုထိန်လင်း) ကို လေဆိပ်သို့ လိုက်ပါပို့ဆောင်
ပြည်တွင်းက လူငယ်နှစ်ဦးရဲ့ ဗိုလ်ခင်ညွန့် ဗွီဒီယိုေ...
ABMA ဂျာနယ် အတွဲ (၁) အမှတ် (၂၁) By abma | Decembe...
KNU နှင့် ABSDF တို့ ပူးတြွဲ့ပီး မာနယ်ပလောအား ပြန်...
ThanShwe Order YeMyint to Meet KhinNyunt- MaungAye...
Divided Heart ဇာတ်ကားမှာ ဒေါ်စုအဖြစ် မီရှဲလ်ယိုး သရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သားငယ် ကင်မ် အဲရစ်စ် (ကိုထိန်လ...